Ukukhishwa okusha kwe-6 ngo-Septhemba: okuthakazelisayo, umlando nokulandisa | Izincwadi Zamanje
Izindaba ezi-6 zokuhlela zikaSepthemba: inoveli yobugebengu, umlando nokulandisa
Septemba. Futhi. Kepha kwehluke kanjani kulo nyaka. Kodwa-ke, izincwadi zisekhona futhi ziningi kakhulu izindaba zokuhlela ezikade zilindelwe kanti ezinye zibambezeleke ngezimo. Akunakwenzeka ukukhuluma ngabo bonke labo abaphumayo, ukuthi kuhlala kunamakhasimende akhomba lokhu noma okunye engingakufaki. Qonda ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele wenze ifayela le- ukukhethwa kwenombolo nobulili. Lawa yi-6 engikhethe kuwo inoveli elandisayo, yomlando, emnyama nemfihlakalo.
1 Impilo yamanga yabantu abadala - u-Elena Ferrante
2 Igama likaNkulunkulu - uJosé Zoilo Hernández
3 Ihhotela Savoy - Maxim Wahl
4 Ephukile - UDon Winslow
5 Ubumnyama nokusa - uKen Follett
5.1 Umnyango - uManel Loureiro
Impilo yamanga yabantu abadala - U-Elena Ferrante
U-Elena Ferrante, umbhali wase-Italiya owadala isaga eliphumelelayo le-Dos amigas (Umngani Omkhulu, Igama Elibi, Izikweletu Zomzimba Nentombazane Elahlekile), ibuya nale noveli entsha isethwe konxiwankulu baseNaples ngeminyaka yama-90s. Futhi isitshela indaba Giovanna, osemusha onelukuluku lokufuna ukwazi nge secreto ukuthi abazali babo bacashe. Ucwaningo lwakho luzokuholela kulabo ukutholakala Mayelana nothando, ucansi namanga ahlala evela.
Igama likaNkulunkulu - UJosé Zoilo Hernández
Ngemuva kwempumelelo yakhe enkulu nge-trilogy ye Umlotha waseHispania (I-Alano, Inkungu Nensimbi, Umnyango Wokuphela Kwezwe), lo mbhali wenoveli yomlando waseCanada ubuya nesihloko esisha engikhulume naso ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kule ngxoxo.
Lapha kusiholela ekuqaleni kwekhulu lesi-XNUMX, lapho i- Kwehla amaSulumane eningizimu yenhlonhlo yase-Iberia futhi baqala ukuthuthuka ngaphandle kokuthi kubonakale kukhona ukunyakaza okuphikisayo. Ukuphela komuntu osabelayo yi- INkosi uRoderico, ezothutha ukubhekana nazo. Ukuyisekela, kukhona nefayela le- ikholomu encane ngigqoke i- insalela ukuthi mhlawumbe ngingashintsha uphawu lokulwa. Futhi amaSulumane azoba nentshisekelo njengokuningi noma ngaphezulu kunokunqoba inhlonhlo.
Ihhotela Savoy - UMaxim Wahl
Okukodwa kokufundwayo okuhlanganisa ukuthintwa kwe- imfihlakalo ne isaga izihlobo, izindawo eziyinkimbinkimbi, futhi uma kungenzeka iBrithani, etholakala engxenyeni yokuqala yekhulu lama-XNUMX. Yilokho okulethwa omunye umbhali ngegama-mbumbulu, ngalesi sikhathi Alemán, esivele yatuswa kakhulu ngumphakathi nabagxeki futhi abahlala phakathi kweLondon neBerlin.
Sise- Ngo-1932 eLondon, nakulelo hhotela Savoy kuletha ndawonye okuhle kakhulu komphakathi wobuciko nobuhlakani wangaleso sikhathi. Ubelokhu ephethe i- Umndeni wakwaWilder iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu nalapho inzalamizi ihlupheka a ukuhlasela kwenhliziyo, indodana yakhe uHenry ikholelwa ekutheni sesifikile isikhathi sokuthi athathe izintambo.
Kepha kumangaze wonke umuntu indlalifa enguViolet, eyodwa umzukulu ongekho emthethweni. Lokhu kuzodingeka kube nempikiswano phakathi kwesifiso sakhe sokuba umbhali okwe-BBC noma unakekele iSavoy futhi ekugcineni samukelwa ngumndeni. Yilapho imicimbi engajwayelekile iqala ukwenzeka ehhotela, kanti uViolet kuzofanele athathe izinyathelo.
Izithombe - UDon Winslow
Sinenhlanhla nabalandeli abaningi balo mbhali waseNyakatho Melika, inkosi yohlobo lwe-noir. Futhi maphakathi noSepthemba siletha lesi sihloko esisha nge Amanoveli amafushane ama-6 ahlaselayo futhi ashubile. Kuzo zonke, uthatha noma agxile ezindabeni eseziwuphawu lwakhe, njenge ubugebengu, lo inkohlakalo, lo ukuziphindisela, ukukhaphela, icala kanye nokuhlengwa. Lezo izindaba.
I-San Diego Zoo
Ubumnyama nokusa - UKen Follett
Kungenzeka kube ngesinye sezethulo ezinkulu zokuhlelwa kulo nyaka. I- prequel ukuze Izinsika zomhlaba kusibuyisela emuva kumzuzu odume kakhulu futhi ophumelele wombhali waseWales, kuphela ukuthi siya ekuqaleni kweNkathi Ephakathi. Kepha sinefomula efanayo: i-protagonist, Edgaryini umakhi wesikebhe; I-Ragna, lo iqhawekazi elihlubukayo, indodakazi yesikhulu sakwaNorman; Alfred, the indela idealist ophupha ngokuguqula i-abbey yakhe ibe yisikhungo solwazi; futhi, kunjalo, okubi komsebenzi okuphinde kube a umbhishobhi ovelele futhi abanonya. Futhi konke okunongwe nge- ukuhlaselwa kwe-viking, ehlala inika umdlalo omningi. Ngisho, akukho okusha ngaphansi kwelanga, kepha yilanga le-Follet.
Isicabha - UManel Loureiro
Ukuphela kwenyanga, sithola inoveli yokugcina yalokhu Umbhali waseGalician, enamagama amaningi ngokwengeziwe kufayela le- imfihlakalo enezinhlamvu zokwesaba. Futhi akukho okungcono kunokuya ezweni labo ukuyazi le ndaba ngokutholakala kwe- isidumbu sentombazanyana, ebulawa ifomu lasendulo lenkambiso, okumangaza abaphenyi bayo.
URachel Hill yi-ejenti esanda kufika kulelo khono elahlekile leGalicia, ozama sindisa indodana yakho, yimuphi umuthi ongeke usakwazi ukuwelapha. Futhi ikubeka ezandleni ze- umelaphi, owayethembise ukumphilisa. Kodwa ke anyamalale u-curandera noRaquel baqala ukusola ukuthi womabili amacala kungenzeka ahlobene.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izindaba ezi-6 zokuhlela zikaSepthemba: inoveli yobugebengu, umlando nokulandisa